Izitshalo zisinda kanjani ogwadule: izindlela nezimo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izingwadule yizindawo zomhlaba ezinesimo sezulu esibi ngokweqile. Kunezimo ezinobutha impela zokuthi impilo ikhule ngaphansi kwezimo ezinhle. Ngakho-ke, izitshalo nezilwane eziningi kufanele zenze ukuzivumelanisa okusha ukuze ziphile kulezi zindawo. Namuhla sizokhuluma ngakho ukuthi izitshalo zihlala kanjani ogwadule. Kukhona ukuguquguquka okuhle okuvumele izitshalo ukuthi ziphile kulezi zingwadule ezinkulu.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi izitshalo ziphila kanjani ogwadule nokuthi yiziphi izidingo okufanele zenziwe ukuze zenze kanjalo.
2 Izitshalo zihlala kanjani ogwadule
2.1 Ukongiwa kwamanzi okukhulu
2.2 Ukuvikelwa kokushisa
2.3 Izitshalo zisinda kanjani ogwadule: ukuzala kabusha
2.4 Ukubekezelelana kwesomiso
Esimweni sezulu esisehlane, inqubo ye-evapotranspiration iyabusa. Ukulahleka komswakama okwenziwe endaweni ethile ngenxa yokuhwamuka okuqondile okubangelwa yimisebe yelanga nokwanda kwamazinga okushisa. Kulokhu kwanezelwa ukujuluka okuncane okukhona okuvela emanzini ezitshalo. Isimo se-evapotranspiration senza ukuthi inani lemvula lihlale ku- inani eliphansi kakhulu unyaka wonke. Amanani ahlala kuma-250 mm ngonyaka. Idatha eyindlala impela, ekhombisa ukungabi bikho kwezimila nomswakama emvelweni. Enye yezindawo ezaziwa kakhulu emhlabeni njengesibonelo sesimo sezulu sogwadule yihlane laseSahara.
Isimo sezulu sasogwadule ngokuvamile sibonakala ngokuba seduze kwendawo eshisayo. Ububanzi lapho kutholakala khona izingwadule eziningi cishe bungaba ngu-15 no-35 degrees. Kulolu hlobo lwesimo sezulu ukuhwamuka kukhulu kunemvula. Izinga lokuhwamuka linenani eliphakeme kunezinga lemvula. Yilokhu okwenza inhlabathi ingavumeli ukukhulelwa kwempilo yezitshalo.
Ezindaweni zaseMpumalanga Ephakathi banesilinganiso samasentimitha angama-20 emvula ngonyaka. Kodwa-ke, inani lokuhwamuka lidlula amasentimitha angama-200. Lokhu kusho ukuthi izinga lokuhwamuka lifinyelela ezikhathini eziyi-10 ngaphezu kwezinga lemvula. Ngenxa yalokhu, umswakama uphansi kakhulu.
Lapho sesazi ukuthi ziyini izici zesimo sezulu sasogwadule, sizobona ukuthi iziphi izinguquko izitshalo ebezifanele zikhiqize ukuze ziphile kulezi zimo zezulu. Ake sibone ukuthi ziyini:
Ukongiwa kwamanzi okukhulu
Izitshalo ezifunda ukuthi zingaphila kanjani ogwadule zikwazi kangcono ukonga amanzi. Siyazi ukuthi izitshalo zilahlekelwa ngamanzi ngenqubo ye-evapotranspiration. Le nqubo ukuhamba kwamanzi ngesitshalo emkhathini. Izitshalo ezinendawo enkulu ngaphezulu yilezo ezijuluka ngokushesha futhi zilahlekelwe amanzi amaningi. Badinga ukuba namanzi amaningi ngangokunokwenzeka ukuze baphile. Izitshalo eziningi ezomile zinamaqabunga amancane noma ameva anciphisa indawo yazo ukunciphisa ukulahleka kwamanzi ngenqubo ye-evapotranspiration.
Ameva awagcini nje ngokunciphisa ukulahleka kwamanzi kodwa futhi asiza ukunqanda izilwane ekudleni isitshalo. Kunezilwane eziningi lokho kuphela Badla izitshalo ehlane ukuhlinzeka ngamanzi abo. Iqembu elilodwa lezitshalo elinaleli qhinga lokonga amanzi yiSclerolaena.
Elinye isu lokufunda ukuthi izitshalo zihlala kanjani ogwadule ukuvikela ukushisa. Siyazi ukuthi izingwadule zinamazinga okushisa aphakeme kakhulu emini futhi aphansi kakhulu ebusuku. Izitshalo ezinamaqabunga aluhlaza zingabamba ukushisa. Lokhu kusho ukuthi ogwadule akuzona zonke izinto ezithakazelisayo. Ogwadule, ukumunca ukushisa yinto yokugcina efunwa isitshalo. Ngakho-ke, okunye ukuguqulwa kwalezi zitshalo ukuthi kube namaqabunga anombala ompunga, oluhlaza okwesibhakabhaka noma oxube ompunga, oluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza okotshani. Lokhu kuhlanganiswa kwemibala kusiza ukunciphisa ukumunca ukushisa. Isibonelo, isihlahla noma i-grey-grey inganciphisa ukumuncwa kokushisa kwamaqabunga ayo ngenxa yombala wayo oluhlaza okwesibhakabhaka.
Izitshalo zisinda kanjani ogwadule: ukuzala kabusha
Ukuzala kungenye yezinto okufanele uzinake lapho kunokushisa okukhulu endaweni. Abantu bavame ukubalekela ukushisa ngokuhlala ezindlini. Lokhu futhi kwenziwa yizinhlobo eziningi zezitshalo zonyaka. Futhi kunezitshalo eziningana zonyaka eziqedayo imijikelezo yabo yokuphila emifushane ngenkathi yemvula. Umjikelezo wayo ukukhula, ukukhiqiza imbewu bese ufa. Imbewu ihlala ingasebenzi futhi iyakwazi ukuphila ezindaweni ezomile.
Lapho izimo zezemvelo ngaphandle zivuma, imbewu iyaqeda bese izitshalo zingasebenzisa lezo zimo ezinhle zomswakama. Imvamisa ngalesi sikhathi lapho benomswakama omningi kulapho ehlane ungabona izitshalo eziningi.
Okunye ukuguquguquka okwenziwa izitshalo ogwadule ukubekezelela isomiso. Phakathi nezinyanga zasehlobo noma isikhathi eside esomile, izitshalo ezibekezelela isomiso zivame ukubonakala zifile. Ziyizitshalo ezinciphisa umsebenzi wazo ubuncane. Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi zibukeka njengezitshalo ezilula njengokushoda kwamaqabunga nangaphandle kwamahlamvu afile. Kodwa-ke, basesimweni sokulala ngesikhathi belinde imvula.
Ekugcineni, okunye kokuzivumelanisa nokwazi ukuthi izitshalo zihlala kanjani ogwadule isilinganiso se-photosynthesis. I-photosynthesis ayilutho nje ukuguqulwa kwesikhutha, amanzi namandla kusuka elangeni kube ushukela ne-oxygen. Izitshalo zimunca isikhutha ngokusebenzisa i-stomata. Esikhathini sezulu esishisayo i-stomata iyavuvukala futhi amanzi asenze sibe ngumphefumulo. Lokhu kusiza ukunciphisa ukulahleka kwamanzi. Ngokuphambene nalokho, ezindaweni ezibandayo i-stomata ihlala ivulekile. Indlela ye-C4 iyona esiza izitshalo zasogwadule ukuthi zimunce isikhutha ngaphandle kokulahlekelwa amanzi. Isakhiwo esihlukile ngaphakathi kwamaseli akho esivumela ukuthi silungise isikhutha esikhungweni esiphansi kakhulu samanzi namazinga okushisa aphezulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngokuthi izitshalo ziphila kanjani ogwadule.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Izitshalo zihlala kanjani ogwadule